Idyasi enqabileyo yemvana
Ipeyinti ye-tulle epinki
Iqhwa leqhwa lihlamba ibhatyi yakho yedenim
Iqhwa elihlamba ikhephu lakho ...
UTeddy uboya begusha
Ukukhetha umbala, sinamava kakhulu. Ngeli xesha lonyaka, sikhetha owona mbala uthandwayo kunye nesiseko ukubonelela abathengi ngeendlela ezahlukeneyo. Ilaphu loboya elithambileyo nelifudumeleyo lolukhethekileyo ebusika. Sisebenzisa amalaphu omzimba angama-260g ane-lining ezingama-210T kunye nombala ophindwe kabini ngobambo be-2 × 2 kwikhefi kunye nomphetho. Iziphumo ezibonakalayo zintle kakhulu, kananjalo ngenxa yexabiso lethu, iya kuba yenye yezona ntengiso zethu zilungileyo ngeli xesha lonyaka. SIZE: 2-8 IMINYAKA
Sigunyazisiwe ngabakwaDisney iminyaka emininzi ukuvelisa iimveliso zeDisney, ngakumbi kubandakanya iimpahla zamantombazana kunye nezamakhwenkwe.
Iimveliso ze-denim ziimveliso ezikhuphisana kakhulu kuthi. Sineeodolo ezininzi zedenim ezivelisa unyaka wonke ezikwenza ukuba sibe nokhuphiswano olukhulu kwilaphu nakwindlela yokusebenza. Le bhatyi emnyama ye-denim, sisebenzisa i-denim enzima ye-CVC kwi-10.5 oz, ukusuka kubantwana abangamakhwenkwe ukuya kumakhwenkwe amakhulu anefuthe elihle lokuhlamba ikhephu kunye noyilo lwe-hoody, nesimbo esidume kakhulu ehlotyeni.
Isinxibo samantombazana sithengisa kakhulu ehlotyeni kwaye ikwayenye yemveliso yethu ephambili yokukhuthaza. Sikhethe kwaye sisebenzisa ilaphu le-chiffon ukwenza indawo engaphezulu yengubo yokuxhathisa kwaye ilungele ihlobo. Icandelo lesiketi lenziwe ngamanqanaba amabini elaphu elinamashiti aneziketi ezijikelezayo ezilungile kwaye zilumkile. Umbane wenziwe ngejezi enye ye-T / C efanelekileyo ukunxiba kufutshane nomzimba. Kukho amaqhosha amancinci ayilwe ngasemva kwekhola enza ukuba kube lula ukunxiba kuwo kunye ...
Igumbi615-620, No. 304 West Zhongshan Rd, Shijiazhuang ， Hebei ， China